The Ab Presents Nepal » लकडाउन अवज्ञा गर्दै मेला गराउने चारवडाध्यक्षसहित ९ जना प्र,क्राउ,यस्तालाइ कस्तो कारबाही गर्दा ठिक होला ?
लकडाउन अवज्ञा गर्दै मेला गराउने चारवडाध्यक्षसहित ९ जना प्र,क्राउ,यस्तालाइ कस्तो कारबाही गर्दा ठिक होला ?
बझाङ चैत -: कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को उच्च जोखिममा रहेको बताइएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लकडाउनको अवज्ञा गरेको आरोपमा चार वडाध्यक्षसहित ९ जना प्र क्राउ परेका छन् । स्थानीय जनतालाई उच्च जोखिममा पारेर चैतली मेला संचालन गरेको आरोपमा चार वडाअध्यक्षसहित ९ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
बझाङको छविसपाथीभेरा गाउँपालिका—३ को बान्‍नीकोटमा वर्षेनी लाग्‍ने मेला लकडाउनमा पनि सञ्चालन गरिएको सोही गाउँपालिकाका चार वडाध्यक्षसहित ९ जनालाई बुधबार नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिएको छ ।स्थानीयले चैत ११ गते जंगलबाट रुखको काकर काटेर ल्याइ मेलाको सुरुवात गरी अष्टमीको दिन बोकाको बली चढाएर सोमबार मेला समापन भव्य रुपमा गरेका थिए ।स्थानीयले चैत ११ गते जंगलबाट रुखको काकर काटेर ल्याइ मेलाको सुरुवात गरी अष्टमीको दिन बोकाको बली चढाएर सोमबार मेला समापन भव्य रुपमा गरेका थिए ।
भारतमा भेटिए ७ सय ७३ जना नयाँ कोरोना संक्रमित – छिमेकी देश भारतमा ७ सय ७३ जना नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छन्। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले बितेको २४ घण्टामा भारतमा ७ सय ७३ जना नयाँ संक्रमिथ थपिएसँगै कूल संक्रमितको संख्या ५ हजार ४ सय ८० पुगेको छ।
अहिलेसम्म भारतमा कोरोनाको संक्रमणबाट १ सय ६४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हिजोमात्रै ३२ जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तैगरी कूल संक्रमितमध्ये ४ सय ६८ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लव अग्रवालले बताएको बिबिसीले जनाएको छ। भारतमा अहिलेसम्म १ लाख १२ हजार २ सय ७१ जनामा कोरोनाको परीक्षण गरिएको छ।
यसैबीच स्पेनमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्युदर बढेको छ। आजमात्रै स्पेनमा ७ सय ७५ जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि हिजो एकैदिन स्पेनमा ७ सय ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो। स्पेनमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेका सँख्या बढेर १५ हजार नजिक पुगेको छ भने १ लाख ४७ हजार संक्रमित भएका छन्।